Umzi mveliso we-Photovoltaics, Ac Isolator, iDc Fuse Holder-FEIMAI
Umgangatho weklasi yokuqala ukumila uphawu olugqwesileyo
Yasekwa ngo-2003, i-Feimai Electric Co., LTD ikwikomkhulu lombane lase China- xinguang Zone yoShishino, Liushi, Yueqing, Zhejiang, China. Ngobuchule obuphezulu bobuchwephesha kunye nezixhobo zokuvavanya imveliso, inkampani yethu ingumenzi omkhulu wezinto zonke ezisebenza ngombane, kwaye sineminyaka emininzi yamava ekunikezeleni isixhobo sombane. Njengoko egubungele indawo ka-2000 square metres, indawo yethu yemveliso ingaphezulu kwe-8000 square metres. . .
Hlala usazi ngokuqhubekayo
Sinikezela ngezisombululo zesicelo ngokusekwe kwitekhnoloji ye-laser Khetha ishishini lakho. ezona zisombululo ze-laser zilungele wena
DC Isolator Tshintshela iNL1 Series
Isiseko Mount (Door Coupling) PM2 Series DC Isolat ...
I-ADDB7-63 / PV Mini yeSekethe yoKwaphula
Inkqubo yaMandla oMbane weSolar kunye neBloft Roofop Isolator switch
Zininzi izehlo zomlilo eNew South Wales kule veki iphelileyo okanye ezibandakanya iinkqubo zamandla elanga- kwaye ubuncinci zimbini kucingelwa ukuba zibangelwe lutshintsho lwedwa olukuzo. Izolo, uMlilo kunye noHlangulo iNew South Wales ixele ukuba ibiye kwisiganeko kwindlu eseWoongarrah ...
Owona matshini uyilwe kakuhle kwindalo iphela ngumzimba womntu. Inendlela eyakhekileyo yokuzikhusela kunye nokuzilungisa. Nokuba le nkqubo ikrelekrele kakhulu ifuna ukulungiswa nokulungiswa ngamanye amaxesha. Kwaye njalo ngenkqubo nganye eyenziwe ngumntu, kubandakanya ukufakelwa kwelanga nge-PV. Ngaphakathi kwelanga ...
Izinto zeNkqubo yoMbane weSola yokuHlala
Inkqubo yombane yelanga epheleleyo ifuna izinto zokuvelisa umbane, ukuguqula amandla abe kukutshintsha okukhoyo kunokusetyenziswa kwizixhobo zasekhaya, kugcinwe umbane ogqithisileyo kunye nokugcina ukhuseleko. Iiphaneli zelanga Solar iiphaneli zelanga t ...
Ulwazi lwemveliso ekumgangatho ophezulu